Ungayidweba njani intombazana ye-anime kunye nepensile ngamanqanaba? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokudweba isinyathelo sepencilwana intombazana ngesinyathelo?
Ngubani intombazana ye-anime? Le yeyona ntombazana iqhelekileyo yekhathuni. Eyona nto iphambili ukwahlula ubuso bubuso. I-Anime ihlala inamehlo amakhulu, umlomo omncinci kunye neempumlo. Ndiyasithanda esi sifundo sokuzoba intombazana ye-anime ene fan kunye ne-kimono.
Ukuqala, siya kuzoba intombazana yethu kwimigca egwenxa.
Sincamathisela ezinye zeempawu zenyani.
Sidweba i-kimono, isaphetha, amehlo.
Izinwele kunye neenkcukacha zentombazana.
Ndicebisa ukuba kwinqanaba lokudibanisa intombazana ye-anime.
Okokuqala, yenza isiseko sentloko
Emva koko, ngokuthe ngcembe sibeka kwisiseko sethu izitho zokuphefumla kunye ne-olodoory.
Emva koko, zoba umfanekiso weenwele ngokubanzi.
Emva koko kuza kwinqanaba lokuzoba ngokweenkcukacha amantombazana ethu anime.
Xa yonke into itsaliwe, susa imigca eyongezelelweyo.
Ukuqukumbela, sipenda intombi yethu ngemibala eza engqondweni.
Intombazana ye-Anime ilula ukuzoba. Siqala ngokuchaza imilo elula esichaza ngayo iipensile. Emva koko siqala ukucacisa, ukuzoba iinwele,
Amehlo, kodwa musa ukusebenza kakhulu. Okulandelayo, yongeza iinkcukacha ezincinci. Inyathelo elilandelayo kukuzoba umzobo wepensile kunye nepensile emnyama ukuze ubhale ngokucacileyo. Sicima ipensile, upende ngepeyinti okanye iipensile intombazana ye-anime ilungile. Kungcono ukuziqhelanisa ngakumbi kwaye uthathe imifanekiso emininzi ye-anime elungiselelwe kwaye uzobe. Kancinci, ungaqala ngokwakho.
Into ephambili yamantombazana e-anime zizindebe ezincinci, ezingenakubonwa mpumlo kunye namehlo amakhulu amakhulu ebusweni. Ukuze udwebe intombazana ngesitayile se-anime kunye nepensile ngamanqanaba, sifuna le nkqubo inyathelo-nyathelo:
Zoba umthamo kwizinwele kwaye uthandeke ngamehlo, zoba amachaphaza encotsheni yokunxiba
yongeza izithunzi kwaye intombazana kwisitayela se-anime ilungile.
Zoba intombazana ye-anime ngepensile:
Okokuqala kufuneka uzobe isangqa. Ukuba ayisebenzi kakuhle, thabatha iphethini yejometri eqhelekileyo ngeepateni.
Kukho enye into enokuthi uyenze: kuqala zoba isangqa. Zoba umgca othe nkqo ecaleni kwawo. Ukujikeleza embindini wesangqa, zoba umgca omnye othe tyaba. Lo iya kuba ngumgca ophezulu wamehlo. Kancinci kancinci sidweba omnye umgca othe tye. Lo iya kuba ngumgca ongezantsi wamehlo. Emva koko sandisa isangqa kancinci, szoba umfanekiso we-chin.
Kwinqanaba lomgca othe tyaba othe tyaba, zoba isiseko samehlo kwii-semicircles, kunye amashiya ngaphezulu kwabo. Umlomo ubonakaliswa ngumgca omncinci, impumlo ichazwe ichaphaza.
Sijonge ekuzobaleni kwamehlo amantombazana anime. Kuqala kufuneka uzobe i-eye ye-contour ukusuka kumgca othe tye oya phezulu othe tyaba. Ngaphakathi kwi-contour nganye, emaphethelweni, zoba iindawo ezintathu eziphezulu (isangqa esincinci). Ke, ngaphakathi kwi-contour, zoba i-oval vertical (pupil), isangqa kwikona yecala lesinye isiseko (okunye okubalaseleyo), iisenti ezibini ezileleyo phantsi komfundi ozimeleyo (ikhareji enye encinci, yesibini ibe nkulu).
umfundi upeyintiwe kakhulu ukuze afumane umbala omnyama kakhulu. Asipendi ngaphezulu kwe-oval encinci kumfundi.
Ezi semicircle zimbini ziphezulu (isiseko samehlo) zipeyintwe ngokukhaphukhaphu kunabafundi.
Sipeyinta ngaphezu kweesenti ezimbini phantsi komfundi ngolu hlobo lulandelayo: eyona incinci incinci ilula kancinci kunelomfundi, lowo ungezantsi ulula kakhulu.
Imivimbo elula, zoba imigca embalwa ngaphezulu kwamehlo ukuqaqambisa ngakumbi amehlo.
Sidweba ii-bangs kunye neenwele zentombazana ye-anime.
Sidweba intamo, amagxa kunye nenxalenye ephezulu yengubo yamantombazana.
Ukuqaqamba okuncinci kunamehlo, sipenda ngaphezulu kweenwele kunye nokunxiba kwentombazana.
Indlela yokudweba abalinganiswa be-anime inokufumaneka apha.
Kwi-anime, amantombazana ahlala evezwa njengemhle kakhulu kwaye ekhangekile. Ke ngoko, ukuzidweba kuyonwabisa. Ungalibali ukuba kuya kufuneka uzobe ngononophelo kuzo zonke iinkcukacha-iilokhi zeenwele, iifolokhwe kwiimpahla, amehlo, iimvakalelo, amathunzi. Ke, ukuzoba intombazana entle ye-anime akukho lula. Ndiza kunika imifanekiso embalwa ngemiyalelo yamanyathelo ngamanyathelo.
Kwaye enye i-animashka endiyithandayo kakhulu.
Kulungile kunye nenye.
Kukho isifundo esinjalo sokuzoba, amantombazana anime. Ukufunda ukuzoba intombazana ye-anime, akunzima, kuya kufuneka uphinda onke amanyathelo kumfanekiso. Ungazoba enye
Siqala ngokuzoba entloko, emva koko imigca yomzimba wonke, kunye nomzobo womzimba ngokwawo, kunye neenkcukacha zawo, kufuneka ulandele imigca ebomvu
Kulungile, ngoku, unokufaka umbala
Kwaye ndingacebisa eli nani elilandelayo ngentombazana ye-anime. Uhlobo lwentombazana engahlaseli. Ayingawo onke amaqhawe ama-mi-mi-mhle, kunjalo? Kwaye ndiyithandile le ntombazana. Ukunyamezelana kunye neempawu zivakala
Imibuzo ye-20 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,393.